Andrasana noho izany ny fanendrena izay mety handimby azy. Araka ny fanazavana voaray, ny nanendrena an’io tale jeneraly teo aloha io, dia tamin’ny alalan’ny “appel d’offre international”. Fa mikasika ny fanendrena ny vaovao ho avy eo kosa, dia miankina amin’ny minisitera sy ny fanjakana raha ny fanazavana voaray. Olona mahafeno ny fepetra sy efa manana traikefa amin’ny fitantanan-draharaha no tokony hotendrena hasolo an’atoa Jaomiary Olivier, araka ny fantatra. Atoa Albert Ravelonjaona, talen’ny DGOP eo anivon’ny JIRAMA no misahana ny fampihodinana ny raharaha vonjimaika ao amin’ity orinasa ity, mandrapahatonga izay tale jeneraly vaovao eo.